Deblistering Machine nezvimwewo-60N - China denderedzwa rechiedza Pharmatech Co., Ltd
Nezvimwewo-60N chinhu patented michina zvinogona kutora capsules, mahwendefa nevamwe nokukurumidza kubva mhoni packs it kubudikidza extrusion. midziyo iyi anonyanya zvakwakanakira nokuda kwayo kumhanya, kukwana piritsi-wokukundwa, uye harmlessness kune mapiritsi. It vanowanzochema zvokushandisa piritsi-wokukundwa pamusoro pamusika. Nokuti marudzi ose Aluminum Plastic Board (APB), etc-60N iri vakapakata nezviripo hurongwa kubata nyore. Ichienzaniswa nedzimwe michina yakafanana, etc yaitevedzana ndivo kupfuura yakanaka piritsi-paakatora muchini rakakura mushonga kugadzira emakambani, kunyanya avo matambudziko mhoni kugadzirwa.
Nezvimwewo-60N chinhu Semi-otomatiki muchina, kupa manually uye 60 hrs / Maminitsi sezvo kunonyanyisa nokushanda nokukurumidza. Hazvina kushanda kwerinenge ose mhoni rongedza.
Previous: Deblistering Machine nezvimwewo-60A